Ngaba Abakholelwa KuThixo Bonke Abantu Abakhululekileyo?
Ngaba abantu abakholelwa ku-Allist Freethinkers? Yintoni iFreethought?
Isichazi esiqhelekileyo sichaza i-freethinker nje ngokuba "yinto eyenza iingcamango malunga nesizathu sokuzimela ngaphandle kwegunya; ngokukodwa umntu ongathandabuzekiyo okanye ophika inkolo yonqulo. "Kuthetha ukuthini ukuba ukuba ngumntu okhululekileyo, umntu kufuneka azimisele ukuqwalasela nayiphi na ingcamango kunye nantoni na. Umgangatho wokugqiba kwexabiso lexabiso lamabango akuyiyo isithethe, imfundiso, okanye amagunya-endaweni yoko, kufuneka ibe isizathu kunye nengqiqo.
Eli gama laqala ukuphakanyiswa ngu-Anthony Collins (1676-1729), umfihlakalo kaJohn Locke owabhala iincwadana kunye neencwadi ezihlasela inkolo yenkcubeko. Wayeyenaye iqela elibizwa ngokuthi "i-Freethinkers" elipapashwe kwiphepha elinesihloko esithi "I-Think-Thinker".
I-Collins isebenzisa eli gama njengegama elisisigxina kumntu ochasayo inkolo ehleliweyo kwaye wabhala incwadi yakhe edumileyo, Incoko yeNgcinga Ekhululekile (1713) ukuchaza isizathu sokuba wayevakalelwa ngaloo ndlela. Waya ngaphaya kokuchaza i- freethinking njengenqwenelekayo kwaye yavakalisa ukuba iyimfanelo yokuziphatha:
Ngenxa yokuba umntu ocinga ngokukhululekile wenza konke okusemandleni akhe okulungisa, kwaye ngoko ke wenza konke uThixo, ongenakufuna into engakumbi kunoma yimuphi umntu kunokuba enze okusemandleni akhe, unokufuna kuye.
Njengokuba kufanelekile, u-Collins akazange alinganise u-freethinking ngokungakholelwa kuThixo- wagcina ubulungu bakhe kwiCawa yase-Anglican. Kwakungekho nkolelo kunkulunkulu onomdla, kodwa kunoko, abantu "bathatha nje iingcamango abaye bazincama kwi-Grandgothers, Mothers or Priests."
Kutheni ukukholelwa kuThixo kunye noFreethought Kunjalo
Ngelo xesha, i-freethinking kunye ne- freethought ntshukumo yayivame ukuba ngumntu wabantu abaye baxhamla njengokuba namhlanje i-freethinking ihlala iphawulekayo kubantu abangakholelwa kuThixo. Akusiyo isigqibo esahlukanisa i-freethought kwezinye iifrifizo, kodwa inkqubo .
Umntu unokuba yintengeni ngenxa yokuba i-freethinker kwaye umntu unokuthi akakholelwa kuThixo ngaphandle kokungabi nantoni.
Kubabenzisayo kunye nalabo badibanisa nabo, bafumana isigwebo sokugweba ngokubhekiselele kwindlela abafunyaniswa ngayo ngokukhawuleza ukuba bahambelane neyona nyaniso. Amabango kufuneka akwazi ukuvavanywa kwaye kufuneka akwazi ukuyikhohlisa-ukuba neemeko ezithi, xa zifunyenwe, ziyakubonisa ukuba ibango lingamanga. Njengoko iNkululeko evela kwiSiseko seNkolo ichaza:
Ukuba isicatshulwa esiyinyanisekileyo kufuneka sivivinywe (yintoni ubungqina okanye iimvavanyo eziphinda ziphinda ziqinisekisile?), Inkohliso (yintoni, kwiingcamango, iya kuyigqiba, kwaye yonke imizamo yokuchasisa ayiphumelelanga?), I-parsimoni (yinto elula inkcazo, efuna iincinci ezincinci?), kwaye kunengqiqo (ingenanto yokuphikisana, i-non-sequiturs, okanye i-ad hominem ye-character attack?).
Nangona abaninzi abantu abangakholelwa kuThixo banokumangaliswa okanye bakuchukunyiswe yilo, isiphetho esicacileyo kukuba i-freethought kunye ne- theism zihambelane ngelixa i-freethought kunye no-atheism ayifani kwaye enye ayifuniyo enye into. Umntu ongenakholelwa kuThixo unokuthi aphakamise ngokusemthethweni ukuchaswa ukuba inkolelo ayikwazi ukuba yinto ekhululekayo ngenxa yokuba inkolelo-inkolelo enkulunkulu-ayikwazi ukusekelwe kwisiseko kwaye ayikwazi ukusekelwe kwisizathu.
Ingxaki apha, nangona kunjalo, kukuba le nkcaso idibanisa isiphelo kunye nenkqubo. Nangona umntu evuma umgaqo wokuba iinkolelo ezinxulumene nenkolo nezopolitiko kufuneka zisekelwe kwisisombululo kwaye zenze umzamo wokwenene, wokunyanisekileyo, kunye nokuqhubekayo wokuvavanya amabango kunye neengcamango ngesizathu, ukwenqaba ukwamukela ezo zinto zingenangqiqo, ngoko lowo mntu kufuneka kuthathwa njenge-freethinker.
Kwakhona, ingongoma malunga ne-freethought yinkqubo kunokuba isiphetho-oko kuthetha ukuba umntu ohluleka ukugqibelela akayi kukwazi ukuba ngumkhululi. Umntu ongenakholelwa kuThixo unokubona ukuba isikhundla sikaloo nto siyiphutha kunye nokuhluleka ukusebenzisa isizathu kunye nengqiqo ngokugqibeleleyo-kodwa into engakholelwa kuThixo ayifezekanga ngolo hlobo? I-Freethought ayixhomekeke ekufezekeni.
12 Kumelwe ube nezixhobo zokufunda iinambuzane eziphilayo